Vaovao - Miandry anao amin'ny seho TPE i IplayVape
Vape azo ampiasaina
Momba ny Iplayvape
Miandry anao amin'ny seho TPE i IplayVape
TPE dia iray amin'ireo fampirantiana paraky matihanina indrindra any Etazonia ary na dia any amin'ny faritr'i Amerika iray manontolo aza. Mitana anjara toerana lehibe amin'ny indostrian'ny sigara elektronika iraisam-pirenena izy io. Etazonia isan-taona, ary natao soa aman-tsara nandritra ny 22 taona.
Amin'ny 26 ka hatramin'ny 28thJanoary, 2022. Ny Tobacco Plus Expo dia hikarakara hetsika ara-barotra sy fialamboly ao anatin'ny telo andro. Fa ity fampirantiana ity dia tsy mitovy amin'ny seho ara-barotra hafa, ny fampirantiana dia afaka mankafy ny karazana vokatra vaovao rehetra manerana izao tontolo izao. Ary ny rehetra dia hiseho any atsimo efitrano ao amin'ny Las Vegas Convention Center.
Mpampiranty maherin'ny 470 no nandray anjara tamin'ny fampirantiana farany (TPE 2021) avy amin'ny faritra 30, ny tsara ho lazaina, ny vape azo ampiasaina dia mitondra tanjaka sy hery vaovao amin'ny indostrian'ny sigara elektronika.
Iplay Vape, satria ny mpanamboatra Shina dia tsy mifantoka afa-tsy amin'ny indostrian'ny sigara elektrika nandritra ny taona maro. Tena faly izahay hampiseho aminao ny vokatra mafana sy vaovao amin'ity fampirantiana ity. Ary manantena izahay fa afaka mahazo namana bebe kokoa sy miresaka momba ny sigara elektronika indostria miaraka.Amin'izay fotoana izay, manantena ihany koa izahay ny hamela etona bebe kokoa hahafantatra momba ny vokatra mandritra ity fampirantiana ity.
Copyright © 2022 IPLAYVAPE.Zo rehetra voatokana.
1005, Block B, Building 3, Tongtai Times Square, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Sina